वर्षका प्रमुख राजनीतिक घटना::netpatrika
वर्षका प्रमुख राजनीतिक घटना
व्यक्तिको जीवनमा एक वर्षको घटनाले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ। कुनै व्यक्तिको एक वर्ष खराब बित्नु समग्र जीवनलाई कुनै न कुनै प्रभाव पार्नु हो। देशभित्र भने एक वर्षका घटनालाई उति धेरै महत्व दिइँदैन। यद्यपि नेपाल यस्तो मुलुक हो, जहाँ एक वर्षमा भएका राजनीतिक घटनाले दूरगामी प्रभाव पारिरहेका छन्। वर्ष २०६९ नेपालका लागि यस्तै दूरगामी प्रभाव पार्ने वर्षका रूपमा प्रमाणित भयो।
वर्ष २०६९ को सबैभन्दा दुःखद एवं देशलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित तुल्याउने घटना संविधानसभाको विघटन बन्न पुग्यो। संविधानसभाको विघटनले एकै साथ राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीव्ानमा विचलन ल्यायो। विदेशी सञ्चारमाध्यममा नेपाल असफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख देशका रूपमा चित्रित भयो। विदेशी चलखेल उत्कर्षमा पुग्यो। नेताहरू अनिर्णयको बन्दी भए। संविधान निर्माणका लागि खर्च गरिएको करिब ९ अर्ब रुपैयाँ मरेको बिरुवामा पानी हालेसरह भयो। संविधानसभाको अन्त्यसँगै आमजनताको नजरमा राजनीतिक नेताहरू अपहेलित एवं अविश्व्ाासी व्यक्तिका रूपमा देखा परे। सबै नीतिको मूल जरो राजनीतिप्रति नै जनताले तिरस्कारको भाव राख्दा निर्दलीय व्यक्तिको हातमा सत्ता जाने अवस्था सिर्जना भयो। फलस्वरूप अहिले गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलराज रेग्मी देशका कार्यकारी प्रमुख भएका छन् भने पूर्वकमर् चारीहरू देशका मन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक वर्षमा घटेका यी घटना सच्याउन नेपाललाई वर्षौं लाग्ने देखिन्छ। स्वतन्त्र रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन, उक्त सभाले बनाउने संविधान एवं संसदीय निर्वाचनपछि बन्ने स्थिर सरकारपछि मात्र वर्ष २०६९ मा भएका गल्तीहरू सच्चिने देखिन्छ। यी काम हुन दशकौं पनि लाग्न सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
२१ वर्षअघि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रको कमजोरी देखाउँदै तत्कालीन नेकपा -माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्ध बितेको दशकमा सबैभन्दा ठूलो घटना बनेको थियो। उक्त युद्धले १५ हजार निर्दोष नेपालीको ज्यान लियो। १५ हजार व्यक्तिको ज्यानको बदला देशले पाएको संविधानसभाको विघटन हुनु आफंैमा आश्चर्यपूर्ण घटना मानिएको छ। सबैभन्दा रमाइलो कुरा, संविधानसभाको विघटन भएको घोषणा त्यही पार्टीका प्रमुख व्यक्तिले गरे, जसले संविधानसभाको माग गरेका थिए। गत वर्ष जेठ १४ गते राति एकिकृत माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री भएको समयमा संविधानसभाको विगठन भएको थियो। देशका प्रधानमन्त्रीका रूपमा डा. भट ्टराईले संविधानसभा विघटन भएको घोषणा गरेका थिए।
दाहालको इसारामा देश
नेपालको राजनीतिमा २०६९ को समग्र वर्ष पुष्पकमल दाहालको वर्ष मान्दा हुन्छ। संविधानसभाको विघटनपश्चात् पनि नेपाली जनताले यही दललाई सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्वीकार गरे भने छिमेकी एवं दातृ राष्ट्रले पनि यही दललाई बढी मान्यता दिएको देखियो। त्यसैले पनि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली राजनीतिमा बढी प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा देखिए। उनकै रणनीतिबमोजिम संविधानसभाको अन्त्य मात्र भएन, त्यसपछिको राजनीति पनि उनकै इसारामा चल्न थाल्यो। राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेत दाहालका छाया ँजस्तै देखिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा -एमाले) लगायत चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएका मधेसी दलसमेत दाहालको बुद्धिचालका गोटीझैं दे खिए। कतिसम्म भने दाहालले हरियो बत्ती देखाएर प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्ने दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील को इरालासमेत प्रधानमन्त्री बन्न असफल भए। आफ्नो दलभित्र मात्र होइन, बाहिरी शक्तिभित्र पनि राम्रो खेल्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा चर्चित दाहालले नेपाली कांग्रेसका कोइराला पनि पदका लोभी छन् भन्ने प्रमाणित गर्न सफल भए। कोइरालाको साटो निर्दलीय व्यक्ति खिलराज रे ग्मीलाई दाहालले देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा समर्थन गरेर उनले भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो यात्रा सुगम तुल्याए।
एकीकृत माओवादीको महाधिवेशन
वर्ष २०६९ एकीकृत माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनका कारण पनि चर्चित रह्यो। १० वर्षे जनयुद्ध र पाँचवर्षे मूलधारको राजनीति गरिरहेको माओवादीको आधिकारिक नीति के हो भन्ने कुराको औपचारिक खुलासा भएका कारण यो महाधिवेशन चर्चित रह्यो। उक्त दलले औपचारिक रूपमै सशस्त्र द्वन्द्व त्याग गरेको एवं लोकतान्त्रिक पँुजिवादीमा प्रवेश गरेको निर्णय गर्‍यो। फलस्वरूप अमेरिकाले लामो समयदेखि लगाइरहेको प्रतिबन्ध औपचारिक रूपमा खुला गरेर माओवादी खुला राजनीतिको समर्थन गर्‍यो। माओवादीले वालिग मताधिकारको प्रयोग गर्दै खुला राजनीति गर्ने कुराको औपचारिक घोषणा विदेशी सञ्चारमाध्यमका लागि महत्वपूर्ण समाचार बनेका थिए। विदेशी सञ्चारमाध्यममा छापिने समाचारले नेपालको विदेशी नीतिमा प्रभाव पार्ने भएका कारण पनि एकीकृत माओवादीको महाधिवेशनलाई वर्षको महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मानिएको छ।
एकीकृत माओवादी यो वर्षभरी राजनीतिको केन्द्रमा रहे पनि यसले केही झड्का खाएको छ। वर्ष २०६९ मा एकिकृत माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्यका साथै रामबहादुर थापा ‘बादल’, सिपी गजुरेल, पम्फा भुसालजस्ता केही प्रभावशाली नेताको अगुवाइमा उक्त दल फुटेपछि त्यसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। १० वर्षे दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो परित्याग गर्दै पुरानो संसदीय पद्धतिमै रमाएको भन्दै बाहिरिएका नेताहरूले माओवादीका लडाकु कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टीमा समेटेका छन्। फलस्वरूप चार दलले समर्थन गरेको खिलराज रे ग्मीको चुनावी सरकारलाई निर्वाचन गराउन अप्ठयारो मात्र पारेको छैन, बन्द र हड्तालको राजनीति गरेर उसले पुरानै क्रियाकलाप दोहोरिने संकेत गरेको छ।
जनजाति पार्टीको गठन
यो वर्ष राजनीतिक रूपमा नेकपा -एमाले) लाई ठूलो घाटा लागेको छ। जनजातिको मुद्दामा उचित निर्णय लिन नसकेको भन्दै उक्त दलका प्रभावशाली जनजाति नेताहरू अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायत एक दर्जन नेताले नयाँ जनजाति पार्टी खोले। नयाँ दललाई नेपाली कांग्रेस र माओवादीका केही जनजाति नेताहरूले समर्थन गरे पनि पार्टीमा एमालेका नेताहरूकै बोलाबाला छ। त्यति मात्र होइन, मधेसका प्रभावशाली नेता रामचन्द्र झा माओवादीमा प्रवेश गरेपछि नेकपा एमाले थप कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको छ।
चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन
वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा देशका प्रमुख राजनीतिक दलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरेका छन्। संविधानसभा विघटन भएपछि बिगि्रएको देशको राजनीति ठाउँमा ल्याउने प्रयास स्वरूप भएको निर्दलीय व्यक्तिको नेतृत्वको यो सरकारले समयमै निर्वाचन गराउने कुरामा शंका गर्न थालिएको छ। गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको यो सरकारलाई नेकपा-माओवादी र साना ३३ दलले विराध गरिरहेका छन्। चुनावी सरकारले निर्वाचनका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं केही आयुक्तहरू नियुक्ति गरे पनि निर्वाचनका महत्त्वपूर्ण काम सुरु हुन सकेका छैनन्। असारसम्ममा नयाँ निर्वाचन गर्ने दायित्व लिएको यो सरकारको काम कारबाही अहिले सुस्त हुँदै गएको छ। यदि यो सरकारले मंसिरसम्म पनि निर्वाचन गराउन सकेन भने २०६९ मात्र होइन, २०७० साल पनि राजनीतिक रूपमा दुःखदायी वर्षका रूपमा चित्रित हुने पक्का छ।
राजनीतिका कारण परेका अप्ठाराहरू
वर्ष २०६९ बजेटविहीन वर्षका रूपमा रह्यो। प्रतिपक्षीहरूको विरोधका कारण डा. बाबुराम भट्राईले वर्षको प्रारम्भमा तृतीयांश बजेट पेस गरेर जेनतेन देश चलाए। त्यसयता भएको राजनीतिक खिचातानीका कारण नयाँ बजेट आएन। फलस्वरूप देशका सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः भए। पेस्कीमा देश चलाउँदा महत्वपूर्ण विकास आयोजना प्रभावित भए। नयाँ काम सुरु हुन सकेनन्। कतिसम्म भने दातृ निकायले दिने पैसा समेत आउन सकेन। राजनीतिक खिचातानीका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त प्रायः भएका छन्। अहिले सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायधीशसहित जम्मा पाँच जनामात्र न्यायधीश छन्। पाँच जना न्यायधीशले फैसला हुन बाँकी ४३ हजार मद्दा किनारा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
लामो समय कुनै प्रभावशाली काम गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले वर्षको अन्तिममा आएर महासमितिको बैठक सम्पन्न गरेको छ। सभापति छानिए यता सुशील कोइरालाले राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै प्रभाव देखाउन नसकेको भन्दै आलोचना भैरहेका बेला भएको यो बैठकले वर्ष २०७० मा गर्ने कार्यको दिशानिर्देश गरेको बताइएको छ।
त्यसैगरी पूर्वपञ्चहरूको दुई दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एवं जनशक्ति पार्टी एक हुने निर्णय गरेका छन्। तत्काललाई दुई दलको एकीकरण के ही पछि धकेलिए पनि यसले गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमै स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले राजतन्त्रको पक्षमा बोल्ने कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र बाँकी छ।